Xayiraadaha Safarka ee Dalal iyo Gobollo sida ay sheegtay UNWTO
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Spain » Xayiraadaha Safarka ee Dalal iyo Gobollo sida ay sheegtay UNWTO
Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Wararka Spain • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Warbixinta Xaddidaadda Safarka ee ka socota Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay (UNWTO)
UNWTO waxay ka dambeysaa waqtiyadii horeyba markii ay sii daayeen warbixin cusub oo ku saabsan Xaddidaadda Safarka ee Dalalka iyo Gobollada maanta. Lamaanaha cilmi baarista ee UNWTO ayaa soo bandhigaya buug yar oo si qurux badan loo naqshadeeyay akhristayaasha eTN way soo dejisan karaan.
Warbixinta cusub ee cusub ayaa ka tarjumeysa xaalad run ah Juun 1. in ka badan bil ka hor iyo ka hor inta Delta version of COVID-19 uusan dib u weerarin adduunka safarka iyo dalxiiska
Xayiraadaha Safarka ee Dalalka iyo Gobollada ayaa si isdaba joog ah isu beddelaya, oo daabacaadda warbixintii ay taageertay dowladda UNWTO ma awoodi doonto inay ku qabato xilli ku habboon ", ayuu yidhi Juergen Steinmetz, guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka (wtn.travel)
Sida ku cad daabacaadda cusub ee Xaddidaadda Safarka ee Dalal iyo Gobollo Warbixin laga soo Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha dalxiiska, laga bilaabo 1-da Juun, 29% dhammaan meelaha loo safro adduunka oo dhan waxay xuduuddoodu gebi ahaanba ka xiran tahay dalxiiska caalamiga ah.
In ka badan kalabar ayaa gebi ahaanba laga xiray dalxiisayaasha ilaa iyo Maajo 2020 ama ka badan, iyada oo badankoodna ay ka tirsan yihiin Waddamada Horumarinta Jasiiradaha Yaryar ee Aasiya iyo Baasifigga.
Marka la barbardhigo, kaliya seddex meelood oo loo safro (Albania, Costa Rica, Dominican Republic) ayaa gabi ahaanba u furan dalxiisayaasha, iyadoo aysan jirin wax xayiraad ah oo hada la saaray.
Bixinta tallaalka adduunka iyo kordhinta kororka xalalka dhijitaalka ah ee safarka nabdoon waa inay horseedaa sare u kaca dhaqdhaqaaqa caalamiga toddobaadyada iyo bilaha soo socda, xogtii ugu dambeysay ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ayaa muujineysa
Saddexdiiba mid ayaa (34%) dhammaan meelaha loo socdaa waa qayb xiran, Iyo 36% Codso natiijo diidmo ah COVID-19 natiijada baaritaanka markaad timaaddo, xaaladaha qaarkood oo ay weheliso shuruud looga dhigo karantiil. Xogta ayaa xaqiijineysa isbedelka ku wajahan meelaha loo doonayo qaadashada jahwareerka badan, qaababka xaddidaadda caddaynta-iyo-halista ah safarka, gaar ahaan marka la eego xaaladda cudur ee faafa iyo soo ifbaxa noocyo cusub oo fayras ah. Runtii, 42% dhammaan meelaha loo socdo waxay soo bandhigeen xaddidaadyo gaar ah oo loogu talagalay dadka soo booqda ee ka imanaya meelaha ay ku kala duwan yihiin oo ay ka mid yihiin joojinta duulimaadyada iyo xiridda xuduudaha illaa karantiil khasab ah.
Xaddidaadda Safarka ee Dalal iyo Gobollo aad ayey u kala duwanaan karaan oo way isbeddeli karaan wakhti kasta. Warbixinta UNWTO ee la sii daayay ayaa bil ka badan jirta, isbedello waaweyn ayaa horay u dhacay waana in ay baaraan dadka safarka ah iyo kuwa ku xeel dheer socdaalka.
Halkan guji si aad u soo degsato warbixinta oo dhan. (PDF)
Intaa waxaa sii dheer, maaddaama inta badan meelaha la tago ee leh tallaabooyinka ugu adag ay leeyihiin qaar ka mid ah heerarka ugu hooseeya ee tallaalka, xogta ayaa sidoo kale tilmaamaysa a xiriirka ka dhexeeya xawaaraha tallaalka iyo yareynta xaddidaadaha. Marka la barbardhigo, meelaha la tagayo ee leh heerar tallaal oo sarreeya iyo halka ay waddamadu awoodaan inay ka wada shaqeeyaan xeerarka iyo hab maamuuska la waafajiyay sida kuwa ka shaqeeya aagga Schengen ee Midowga Yurub, ayaa si fiican ugu habboon in loo oggolaado dalxiisku inuu tartiib tartiib ugu soo laabto.
Talaabooyin kala duwan
Kala duwanaanshaha gobolka ee la xiriira xayiraadaha safarka ayaa weli ah. 70% dhammaan meelaha loo tago Aasiya iyo Baasifigga ayaa gebi ahaanba xiran, marka la barbar dhigo kaliya 13% Yurub, iyo sidoo kale 20% Ameerika, 19% Afrika, iyo 31% Bariga Dhexe.
Qiimaynta shuruudaha hadda Rakaabka la tallaalay, 17% dhammaan meelaha loo safrayo adduunka oo dhan waxay si gaar ah ugu sheegaan rakaabka la tallaalay xeerarkooda. Xaaladaha badankood, xaddidaadaha safarku waxay sii wadaan inay khuseeyaan rakaabka si buuxda loo tallaalay (kuwaas oo qaatay laba qiyaasood oo tallaal la oggol yahay), in kastoo, kuwo kale, dhammaan xayiraadihii laga qaaday. UNWTO waxay rajeyneysaa in tani ay si weyn isu beddeli doonto toddobaadyada soo socda.
Warbixinta ayaa tilmaameysa in dib u bilaabida dalxiiska adduunka uu ahaan doono mid aamusan illaa iyo inta ay dowladuhu sii wadaan inay ka waaniyaan taxaddarka. Afar ka mid ah 10-ka suuq ee ilaha ugu sarreeya waxay marwalba kula taliyaan muwaadiniintooda kahortaga safarada aan muhiimka ahayn ee ay ugu baxayaan dibadda (afartaan ayaa soo saaray 25% dhammaan dadka caalamiga ah ee yimid 2018).
Warbixinta Qaramada Midoobay ee Xaddidaadda Safarka Soo dejiso bilaash (PDF)